“စိတ်ဆိုးနေတဲ့ချစ်သူလေးကို ထင်ရှူးတောထဲမှာ Surprise တိုက်လိုက်တဲ့ ဖြိုးလေး” – Cele Gabar
“စိတ်ဆိုးနေတဲ့ချစ်သူလေးကို ထင်ရှူးတောထဲမှာ Surprise တိုက်လိုက်တဲ့ ဖြိုးလေး”
ပရိသတ်တွေအားကျနေရတဲ့ စုံတွဲလေးတစ်တွဲဖြစ်တဲ့ ဖြိုးလေးနဲ့ဝါဆိုမိုးဦးတို့ကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ လက်တွဲလာခဲ့တာ ချစ်သူသက်တမ်း(၄)နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကတော့ ရန်ဖြစ်လိုက်၊ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့အချစ်ခရီးလမ်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလေ့ရှိသူတွေပါ။
ဒီနေ့ချစ်သူများနေ့လေးမှာတော့ ရိုက်ကွင်းကြောင့်အလုပ်များနေတဲ့ဖြိုးလေးကို ဝါဆိုကတော့ စိတ်ဆိုးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး “နေ့ရက်တိုင်းဟာ Valentines နှစ်ပတ်လည်တွေရေတွက်လို့.. V Day ကြီးမှာ အလုပ်တွေလိုက်လုပ်ပေးရမှာမလို့ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ကောင်မလေး ဒီနှစ်တော့ ဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်လို့ ခွင့်လွတ်ပါ” ဆိုပြီး ဖြိုးလေးကတော့ မနက်ပိုင်းမှာတောင်းပန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းလေးရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ဝါဆိုတစ်ယောက် စိတ်ကောက်ပြေသွားအောင် ဖြိုးလေးကတော့ Surprise လေးလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “သူ Valentine’s Day မှာ Shooting ရိုက်လို့စိတ်ဆိုးပြီး သူ့ Shooting ကိုနေ့လည်မှ လိုက်သွားတာ.. ဟိုလည်းရောက်ရော ကိုယ့်ကို ထင်ရှူးပင်လေးတွေကြားမှာ Surprise တိုက်လိုက်ရော ဟီးဟီး.. Thank U ကို.. မအားတဲ့ကြားက Surprise လုပ်ပေးလို့ Happy Valentine’s Day ပါ” ဆိုပြီး ကြည်နူးဖွယ်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်ကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ကတော့ မကြာသေးခင်ကမှ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့အချစ်တွေနဲ့ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ “အလိုအပ်ဆုံးအရာ” ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို ထွက်ရှိထားပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့နှစ်ခြိုက်အားပေးမှုကို ရရှိထားပါသေးတယ်။အမြဲတမ်းရိုနေတဲ့ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ ဒီနေ့ချစ်သူများနေ့လေးမှာလည်း အချိန်မရှိတဲ့ကြားက ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေဖန်တီးခဲ့ကြသေးတာမို့ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးအတွက် သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ပျော်ရွှင်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
“စိတ္ဆိုးေနတဲ့ခ်စ္သူေလးကို ထင္ရွဴးေတာထဲမွာ Surprise တိုက္လိုက္တဲ့ ျဖိဳးေလး”
ပရိသတ္ေတြအားက်ေနရတဲ့ စံုတြဲေလးတစ္တြဲျဖစ္တဲ့ ျဖိဳးေလးနဲ႔ဝါဆိုမိုးဦးတို႔ကေတာ့ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နားလည္မွုအျပည့္နဲ႔ လက္တြဲလာခဲ့တာ ခ်စ္သူသက္တမ္း(၄)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။သူတို႔ႏွစ္ဦးကေတာ့ ရန္ျဖစ္လိုက္၊ျပန္ခ်စ္လိုက္နဲ႔ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့အခ်စ္ခရီးလမ္းကိုလည္း ပရိသတ္ေတြကိုမွ်ေဝေပးေလ့ရွိသူေတြပါ။
ဒီေန႔ခ်စ္သူမ်ားေန႔ေလးမွာေတာ့ ရိုက္ကြင္းေၾကာင့္အလုပ္မ်ားေနတဲ့ျဖိဳးေလးကို ဝါဆိုကေတာ့ စိတ္ဆိုးေနခဲ့တာျဖစ္ျပီး “ေန႔ရက္တိုင္းဟာ Valentines ႏွစ္ပတ္လည္ေတြေရတြက္လို႔.. V Day ၾကီးမွာ အလုပ္ေတြလိုက္လုပ္ေပးရမွာမလို႔ စိတ္ဆိုးေနတဲ့ေကာင္မေလး ဒီႏွစ္ေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ေပးႏုိင္လို႔ ခြင့္လြတ္ပါ” ဆိုျပီး ျဖိဳးေလးကေတာ့ မနက္ပုိင္းမွာေတာင္းပန္ခဲ့ပါေသးတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေန႔လည္ခင္းေလးေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဝါဆိုတစ္ေယာက္ စိတ္ေကာက္ေျပသြားေအာင္ ျဖိဳးေလးကေတာ့ Surprise ေလးလုပ္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ “သူ Valentine’s Day မွာ Shooting ရိုက္လို႔စိတ္ဆိုးျပီး သူ႔ Shooting ကိုေန႔လည္မွ လိုုက္သြားတာ.. ဟိုလည္းေရာက္ေရာ ကိုယ့္ကို ထင္ရွဴးပင္ေလးေတြၾကားမွာ Surprise တိုက္လိုက္ေရာ ဟီးဟီး.. Thank U ကို.. မအားတဲ့ၾကားက Surprise လုပ္ေပးလို႔ Happy Valentine’s Day ပါ” ဆိုျပီး ၾကည္ႏူးဖြယ္ပံုရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ ပရိသတ္ကို မွ်ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။
သူတို႔ကေတာ့ မၾကာေသးခင္ကမွ သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕အခ်စ္ေတြနဲ႔ လႊမ္းျခံဳထားတဲ့ “အလိုအပ္ဆံုးအရာ” ဆိုတဲ့သီခ်င္းေလးကို ထြက္ရွိထားျပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ႏွစ္ျခိဳက္အားေပးမွုကို ရရွိထားပါေသးတယ္။အျမဲတမ္းရိုေနတဲ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးကေတာ့ ဒီေန႔ခ်စ္သူမ်ားေန႔ေလးမွာလည္း အခ်ိန္မရွိတဲ့ၾကားက ေပ်ာ္ရႊင္စရာေလးေတြဖန္တီးခဲ့ၾကေသးတာမို႔ ဆယ္လီကမာၻပရိသတ္ၾကီးအတြက္ သူတို႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္စရာပံုရိပ္ေလးေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
“(၁၅)နှစ်အရွယ် Rapper ပေါက်စလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ ရွှေထူး”
“အိပ်ချိန်မှာတောင် ကောင်းကောင်းအနားမယူနိုင်ဘဲ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်”